Vamwe Vagari Vochema neNzendo Refu Dzavari Kufamba Kuti Vatore Zvitupa
Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nenzendo refu dzavari kunzi vafambe kuti vakwanise kutora zvitupa zvavachada kuzoshandisa pakuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Vagari vemuHarare vanoti nzvimbo dzakatarwa nevebazi rinowona nezvekutoreswa kwezvitupa kuti vatorere zvitupa pasi pechirongwa chebazi iri chekupinda munogara veruzhinji kuti vatore zvitupa chiri kudaidzwa kuti Mobile Registration Exercise dziri kure nekwavanogara.
Mumwe mugari wemumusha weGreencroft muHarare, VaJonathan Musimurimwa, vanoti zviri kuvaomera kuti vaende kuMt Pleasant kunotora chitupa sezvo vachiti vari kuburitsa mari yakawanda mukufamba kuti vanosvika pari kutorerwa zvitupa.
Semuenzaniso, vagari vemuGreecroft, Mabelreign, Westlea, Madokero, Westgate, Avonlea ne Good Hope vese vari kunzi vaende kunotorera zvitupa kuMt. Pleasant pasi pechirongwa cheMobile Registration Exercise ichi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita saVaNixon Nyandoro vanogara mumusha weAshdon Park vanoti kunyange hazvo kwakagara kune nzvimbo dzinotorerwa zvitupa dzakaita seMarket Square, Employment pamwe nekumapasipoti, nzvimbo idzi dzinogara dzakazara nevanhu zvavanoti zvinovapedzera nguva yakawanda vari mumitsetse
Sachigaro weMDC muHarare, VaEric Murai, vanoti dambudziko iri rakatekshera neHarare yose zvavanoti zviri kuita kuti vatsigiri vavo vazhinji vatadze kutora zvitupa zvavachazoshandisa kuvhota.
VaMurai vanotiwo vanhu vakarasa zvitupa vanofanira kupihwa zvitupa izvi pachena pasina mubhadharo sezvaiwanzoitwa makore ese kana patarisana nesarudzo.
Vari kutungamirira nyaya dzesarudzo muMDC-T, VaMurisi Zwizwai, vaudza Studio7 kuti sebato vatotora danho rekuti vakwidze kumatare nyaya yekushomeka kwenzvimbo dziri kutorerwa zvitupa zvikurusei mumadhorobha ose munyika umo mavanoti ndimo mune vatsigiri vavo vakawanda.
Zvichakadai, mukuru anowona nezvekutoreswa kwezvitupa, VaTobaiwa Mudede, vanoti hapana chachinja pamafambisiro avo ebasa rekupa vanhu zvitupa pasi pechirongwa che mobile registration exericise.
VaMudede vaudza Studio7 parunharare kuti vari kubhadhariswa vanhu vakarasa zvitupa vachiti vose vari kutora zvitupa kekutanga havana mari yavari kubhadhariswa.
Vakarasa zvitupa vari kubhadhariswa madhora gumi pamunhu vachiti ndiyo mari yavagara vachibhadhara mazuva ese chirongwa cheMobile Registration Exercise, icho chakaparurwa neMuvhuro chisati chatanga.
VaMudede vatiwo nzvimbo dziri kutorerwa nevanhu zvitupa pasi pechirongwa ichi ndidzo nzvimbo dzavagara vachishandisa pose panoitwa chirongwa ichi saka hapana chinoshamisa.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakatarisirwa kutanga kunyoresa vanhu sevavhoti musarudzo dzegore rinouya kana chirongwa chekutoresa vanhu zvitupa chapera.